02 | Oct | 2021 | SAVE OUR COUNTRY | SAVE MYANMAR | RESPECT OUR VOTES | HONOR ELECTION RESULTS | Page 2
ဖောင်းကားတွင် ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရေး ပြည်သူများ ချီတက် ဆန္ဒပြ
ဒီးမော့ဆိုအနီး ထူလွီးဘီလာရွာအနီး အကြမ်း ဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီမှ အနည်းဆုံး ၂ ဦး ဒဏ်ရရ
ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ထူလွီးဘီလာနှင့် သဲတောင်တစ်ကြောတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကရင်နီတပ်မ တော် KA၊ KNDF တပ်ရင်း ၁၉ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိပြီး စစ်ကောင်စီတပ် သား ၂ ဦး မိုင်းနင်းမိပြီး ဒဏ်ရာရကြောင်း ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် တပ်ရင်း ၁၉ (ဒီးမော့ဆို) တပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွဦးနေဆဲဖြစ်ကာ ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေကြောင်း၊ ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ အနီးဝန်းကျင်တွင် သွားလာခြင်းမပြုလုပ်ရန် KNDF တပ်ရင်း ၁၉ မှ ထုတ်ပြန်သည်။khit thit
မတ္တရာမြို့နယ်က ပရဟိတ ကျောင်းဆရာကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီး
မန္တလေးတိုင်း၊မတ္တရာမြို့နယ် မင်္ဂလာသီရိရွာမှာနေထိုင်သည့် ပရဟိတကျောင်း ဆရာတစ်ဦးကို ယနေ့ညနေပိုင်းက စစ်ကောင်စီတပ်များက အင်အားအလုံး အရင်း နှင့် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရသည်။
ကျောင်းဆရာဦးချစ်ဦးသည် မင်္ဂလာသီရိရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျူရှင်ဖွင့်ထားပြီး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာသင်ကျောင်းများတွင် အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေ သူဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ယနေ့ညနေ ၅နာရီကျော်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေစဉ် စစ်တပ်က လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ် သည်။
“ဘာလို့ဖမ်းမှန်းမသိဘူး။သူကဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။အရင်က NLD ပါတီ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) ထောက်ခံဖူးတာကို ဒလန်သတင်း ပေးလို့ ဖမ်းတာနေမှာ။ ကျောင်းတက်ရင်း ဒီရွာမှာလာနေဖြစ်သွားတာ။ မိသားစုဝင် တွေက မကွေးကဆိုတော့ ဖမ်းခံရပြီးဘယ်လိုက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်”ဟု ၎င်းနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါကျောင်းဆရာဦးချစ်ဦးသည်မကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီး မန္တလေးကွန်ပျူ တာတက္ကသိုလ်က မဟာဘွဲ့ရခဲ့သည်။mizzima
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ပူတာအိုသို့ သွားရန် ထပ်မံစီစဉ်
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှာ ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့သို့ လာဖို့ ရှိတယ်လို့ ပူတာအို ၄၆ တပ်ရင်းမှ အရာရှိတစ်ဦးက ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
“ဒီနေ့လာတဲ့ နယ်လုံ၀န်ကြီးက ရှေ့ပြေး လာတာပါ။ မနက်ဖြန်တော့ မင်းအောင်လှိုင် လာမှာဖြစ်တယ်။ လာရင်းကိစ္စကတော့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီး ခေါင်းလန်ဖူးဘက်ကိုတက်ဖို့ ခရီးစဉ်ဆွဲထားတယ်” လို့ ၄၆ တပ်ရင်းမှ အရာရှိက ပြောပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာ ပူတာအိုကိုတက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ -၁ က မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို ကားလမ်းကို ၃ ရက်ကြာပိတ်ခဲ့လို့ ပူတာအိုခရီးစဉ်ကို လုံခြုံရေးကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် ပူတာအိုကို သွားဖို့ စီစဉ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပူတာအိုခရီးစဉ်မတိုင်မီ ပူတာအိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PUTAO PDF) က ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်သလို အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ မနေ့ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ် ခရီးစဉ်သွားရောက်နေပါတယ်။ DVB
ဆားလင်းကြီး အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ပြည်သူများ ချီတက် ဆန္ဒပြ
စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဒုတပ်ကြပ်အဆင့်ရှိသူကို ကရင်နီဂျန်ဇီအထူးတပ်ဖွဲ့ဖမ်းဆီး
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများလုပ်သည်ဟု သင်္ကာမကင်းဖြစ်စရာရှိသော စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဒုတပ်ကြပ်အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးကို Karenni Generation Z. (KGZ) အထူးတပ်ဖွဲ့က ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ ၊ဘုရားဖြူရပ်ကွက်ရှိ အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်း အဆရ(၁၀) မှာ အသက် ၃၇ အရွယ်ရှိ ဒုတပ်ကြပ် သိန်းဇော်ကို ကရင်နီပြည် နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာအနီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။“
ဂိတ်မှာ မင်္သကာလို့ သူကိုဖမ်းပြီး စစ်တာ အဲမှာ သူကိုမိတာ။ ဒလန်လာလုပ်တာနေမယ်။ အိတ်ထဲမှာသူ ယူနီဖောင်း နဲ့ ဖုန်းတွေ့တယ်။ အဆရ (၁၀) တပ်ရင်းကလို့ပြောတယ်။ ထပ်မေးတော့ လွိုင်ကော်အခြေစိုက် ဒကစ တပ်ကနေ့ ထွက်ပြေးလာတာလို့ပြောတယ်။ သူက ဖမ်းမိပြီး စစ်တော့မှာ ဖြေတာ ။ သူအလိုလိုဖြေတာမဟုတ်ဘူး “ ဟု သိန်းဇော်ကို Karenni Generation Z. (KGZ) အထူးတပ်ဖွဲ့ က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဒုတပ်ကြပ်သိန်းဇော်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်။ယနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ကလည်း ကုန်းသာကျေးရွာ နဲ့ သေးဆူလဲကကျေးရွာ ကြားတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားသည့် မိုင်း နင်းမိကြောင့် အသက် ၄၀အရွယ် မဌေးဌေးဆိုသည့်အမျိုးသမီးတဦး ညာဘက်ခြေထောက်ပြတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။mizzima
အောက်ရေဖြူကျေးရွာတွင် ပြည်သူ(၃)ဦးကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက နေ အိမ်များအတွင်း ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွား
ထားဝယ်ခရိုင် လောင်းလုံးမြို့နယ် အောက်ရေဖြူကျေးရွာ မဟာဗောဓိဘုန်းကြီးကျောင်း အနီးတွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက ပြည်သူ ၃ဦးကို နေအိမ်များအတွင်း ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဒေသခံပြည်သူ များ ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များ ဖမ်းဆီးသွားသည့် ကိုရင်မင်းထွန်း နှင့် မမီးအိ တို့သည် မောင်နှမများဖြစ်ကာ အောက်ရေဖြူကျေးရွာ တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး နောက်ဖမ်းဆီးခံရသူ ကိုဖြိုးပြည့်စုံသည် ဂေါ့အင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ကို မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးသည်ကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း ဒေသခံပြည်သူ တစ်ဦးကပြောဆိုသည်။
” မနက်က အောက်ရေဖြူ ဈေးဘေးမှာ သပိတ်စစ်ကြောင်း လာပြတော့ ဓာတ်ပုံနဲ့ လာရှာတယ်။ လာမေးတယ်။ ရွာသားတွေပြောပုံအရတော့ သူတို့ကို စစ်မေးမလို့ ဖမ်းသွားတာဖြစ်ဖို့များတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာအတွက်ကြောင့် ဖမ်းတယ်ဆိုတာတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူး” ဟု ဒေသခံပြည်သူ တစ်ဦးကပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များသည် အောက်ရေဖြူကျေးရွာ ဈေးအနီးတွင် လူအင် အား ၁၀ ယောက်ခန့် ကား၂ စီးဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ဓာတ်ပုံနှင့် တကွ ပြည်သူများအား ရှာဖွေနေကြောင်း အနီးအနားရှိ နေအိမ်များအား အော်ဟစ် ဆဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ပြန်သွားကြောင်း ကျေးရွာနေ ပြည်သူများက ပြောဆိုသည်။khit thit
စပါးစိုက်​တောင်သူတစ်ဦးက “အရင်းနှီးအများကြီး ရင်းနေရတာ ခုက၊ မြေသြဇာစျေး အရမ်းများနေပြီ ၂ ဆကျော် တက်တာ။ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ဘာတွေကအစ အကုန်တက်နေတယ်။ ဝယ်သုံးရတာ သိပ်အဆင်မပြေကြဘူး” လို့ ပြောတယ်။
တောင်သူတစ်ဦးက “စပါးစျေးလည်း နည်းနည်းပဲရတယ်။ အရင်က စပါးတင်း ၁၀၀ ကို ကျပ် ၇ သိန်းရတယ်။ အခုက ကျပ် ၈ သိန်းဝန်းကျင်ရတယ်။ လာမယ့်သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် စပါးသစ်ပေါ်တော့မယ်။ စပါးသစ်က စပါး​ဟောင်းလောက်စျေးမရဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးထိုးကျပြီး ဒေါ်လာဈေးတက်လာတာနဲ့အတူ မြေသြဇာနဲ့ ပိုးသတ် ဆေးတွေအပါအဝင် ပြည်ပကနေ တင်သွင်းရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အဆမတန် ဈေးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ဆန်ဖူလုံမှုရှိတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုလျှံတဲ့ ဆန်တွေကို ပြည်ပတင်ပို့နိုင်တဲ့ အထိ အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် ဆောင် ရွက်ဖို့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မနေ့က ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ ခရီးစဉ်မှာ ရပ်မိရပ်ဖတွေကို တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ DVB
ယင်းမာပင်တွင် အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင် စနစ် တော်လှန်ရေး ပြည်သူများ ချီတက် ဆန္ဒပြ
စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်ကို စိတ်ကြွဆေးပြား ၆၇ ပြားနှင့် ဖမ်းမိပြီး အရေးယူဆောင် ရွက်မည်ဟု ကရင်နီပြည်ရဲဌာနက ထုတ်ပြန်
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်ကို စိတ်ကြွဆေးပြား ၆၇ ပြားနှင့် ဖမ်းမိပြီး ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်နီပြည်ရဲဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်‌၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသတင်း ပေး(ဒလန်)ဟု မသင်္ကာသူအမျိုးသား ၁ ဦးကို KGZ အထူးတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကရင်နီပြည်ရဲဌာန(KSP)သို့လာရောက်အပ်နှံခဲ့ကြောင်း၊ KSP အဖွဲ့က ၎င်းမသင်္ကာသူ ကိုယ်ခန္ဓာအား ကနဦး စစ်ဆေးရှာဖွေရာ ၎င်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ WY စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၆၇ ပြားအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း မင်္သကာသူအား KSP က စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။khit thit